फेरी अमेरिकामा अर्को ठुलो सङ्कट आउंदै, अमेरिकामा बढ्यो चिन्ता ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/फेरी अमेरिकामा अर्को ठुलो सङ्कट आउंदै, अमेरिकामा बढ्यो चिन्ता !
न्यूयोर्क – कोरोनाभाइरस स`ङ्कटले अमेरिकी समाजमा गहिरो प्रभाव पारिरहेकै छ, तर पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको विवरणले सबैलाई चिन्तित र आत`ङ्कित दुबै बनाएको छ । अर्थात् करिब दुई महिनाको अवधिमा नर्सि`ङ होममा रहेबसेका ११ हजारभन्दा बढी वृद्ध`वृद्धाको कोरोना भाइरसकै कारण ज्यान गएको छ । अमेरिका`भर फैलिएका यी न`र्सिङ होममा आ`श्रित वृद्धवृ`द्धाको अझै पनि कोरोना भाइरसको पर्याप्त परी`क्षण गर्न नसकिएको खबरले सबैलाई सोच`मग्न बनाएको छ ।
अझ न त संघीय सरकार न न्यूयोर्कजस्ता बढी निधन भएका राज्यले नै नर्सिङ होममा रहेका व्यक्ति र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको अनिवार्य स्वास्थ्य परी`क्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छन । अमेरिकामा अहिले वृद्धवृद्धा र अशक्तलाई राख्न झण्डै १५ हजार नर्सिङ केयर होम सञ्चालनमा रहेका छन् । यीमध्ये करिब एक तिहाईमा मात्र परीक्षणको व्यवस्था गर्न सकिएको छ । परीक्षणपछि मात्र भाइरसको प्रसार रोक्न र बिरामी व्यक्तिलाई अलग्याउन सकिन्छ ।
“यसको अर्थ के भने केयर होममा रहेका सबै व्यक्तिको परीक्षण नगर्ने हो भने हामीले यस्ता कथाहरु अरु धेरै पढ्न पाउने छौं,” फेमिलिज फर बेटर केयरका लागि वकालत समूहका ब्रायन लीले बताउनुभयो । “एक पटक यो रोग भित्रियो भने तत्कालै यसलाई रोक्न सकिन्न । परीक्षण गर्नुपर्ने कुरा थाहा हुँदा–नहुँदै धेरै मानिसमा संक्र`मण फैलिइसकेको हुन्छ । त्यसपछि त शवको थुप्रो लाग्ने न हो ।” यस्तै घटना अमेरिकाका सबैभन्दा ठूला नर्सिङ केयर होममा देखिइसकेको छ । गत हप्ता ब्रुकलिनमा रहेको एउटै नर्सिङ होममा आश्रित ५५ जनाको ज्यान गयो । त्यसपछि नर्सिङ होमका प्रमुखले वृद्धवृद्धामा सामान्य लक्षण मात्र देखिएको तर कुनै पनि व्यक्ति वा कर्मचारीको कोरोना परीक्षण नगरिएको स्वीकार गरेका थिए ।
भर्जिनियाको रिचमन्डस्थित एक नर्सिङ होममा हालसम्म ४९ जना ज्येष्ठ नागरिकको निधन` भइसकेको छ । नर्सिङ होमका स्वास्थ्य निर्देशकले परीक्षण सामग्रीको अभावका कारण सबै व्यक्तिको परीक्षण गर्न झण्डै दुई हप्ता ढिला भएको स्वीकार्नु भएको छ । परीक्षण गर्दासम्म कोरोनाको फैलावट नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको थियो । पछि, परीक्षण गर्दा कूल ९२ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखियो ।
अमेरिकन हेल्थ केयर एसोसिएशनका प्रमुख कार्यकारी मार्क पार्किन्सन केयर होममा रहेका वृद्धवृद्धा र कर्मचारीको ज्यादै थोरै प्रतिशतको मात्र परीक्षण भइरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँको भनाईमा संघीय र राज्य सरकारले शुरुमा नर्सिङ होमलाई खासै प्राथमिकतामा राखेका थिएनन् । “यस्तो लाग्छ, हामीलाई पूरै बेवास्ता गरिएको थियो,” पार्किन्सनले भन्नुभयो । “पक्कै पनि अहिले अस्पतालभन्दा पनि वास्तविक लडाईं नर्सिङ होमहरुमा हुनु पर्दछ । यहाँ पहिलो प्राथमिकता दिइनु पर्दछ ।”
संयुक्तराज्य अमेरिकाका झण्डै दुई तिहाई नर्सिङ होममा अझै पनि “परीक्षण किटहरूमा सहज पहुँच” छैन । झण्डै ५० हजार वरिष्ट स्वास्थ्यकर्मी सदस्य रहेको दिगो स्वास्थ्य सेवा नामको समाजसेवी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक क्रिस ल्याक्स्टनको विचारमा नर्सिङ होमहरुले अझै पनि पर्याप्त स्रोतसाधन प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ । “स्थानीय अस्पतालहरू र स्वास्थ्य विभागहरूसँग राम्रो सम्बन्ध विकास गरेका नर्सिङ होममात्र अहिले भाग्यमानी देखिएका छन्” ल्याक्स्टनले भन्नुभयो ।
अमेरिकामा हाल दैनिक १ लाख ५० हजार व्यक्तिको परीक्षण भइरहेको छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुको भनाईमा यसलाई अझ बढाउनु पर्दछ । हार्वर्ड ग्लोबल हेल्थ इन्स्टिच्युटका निर्देशक डा आशिष झा भन्नुहुन्छ, “भाइरसको प्रसार रोक्न हामीले दिनहुँ दशौं लाख परीक्षण गर्नु आवश्यक छ ।”संघीय स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागले एसोसिएटेड प्रेससँगको जिज्ञासामा “अहिले धेरै परीक्षण भइरहेको र आफूहरुसँग पर्याप्त क्षमता रहेको” बताएको छ ।
न्यू हेम्पशायर, कोलोराडो, फ्लोरिडा, मेरिल्याण्ड, टेनेसी र विस्कन्सिनलगायत धेरै राज्यहरूले राष्ट्रिय गार्डलाई कोरोना परीक्षणका लागि फिल्डमा खटाएका छन् ।संघीय सरकारले यसै हप्ता कोरोना संक्र`मणको अवस्था ट्राक गर्ने र नर्सिङ होमको अवस्था समेतलाई समेटेर विवरण सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराएको छ । यसैबीच, एपीले राज्यका स्वास्थ्य विभागहरू र मिडिया रिपोर्टका आधारमा संकलन गरेको विवरण अनुसार अमेरिकाभर नर्सिङ होम र दिर्घरोगीका उपचार केन्द्रहरुमा कोरोनाभाइरसको संक्र`मणबाट ११ हजार २६० जनाको नि`धन भएको छ । यीमध्ये करिब एक तिहाई न्यूयोर्कका रहेका छन् ।
६ वर्षसम्म सँगै बसेकी अंकिता रुदै सुशान्तको परिवार भेट्न पुगिन् ..!!